မြန်မာစပါးအုံး Burmese Python အမည်ခံယူဖြစ်ခဲ့ပုံကို ပြောပြတဲ့ အောင်လအန်ဆန် – Khit Lunge
မြန်မာစပါးအုံး Burmese Python အမည်ခံယူဖြစ်ခဲ့ပုံကို ပြောပြတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ပြန်လည်ရောက်ရှိနေတဲ့ One Championship မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းနှင့် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအင်န်ဆန်းကို မြန်မာတိုင်းမ် အားကစားသတင်းထောက် စည်သူအောင်မျိုးကျော်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်ကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။Q-ပထမဆုံးအနေနဲ့ Burmese Python ဆိုတဲ့အမည်ကို ဘယ်လိုရခဲ့တာလဲ?
A-ကျွန်တော်ဘယ်လိုရခဲ့တာလဲဆိုတော့ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာအမေရိကန်မှာစကစားတော့ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်နိုင်ငံကလဲလို့မေးတယ်။ မြန်မာကလို့ပြောတော့မသိကြဘူး။ အဲဒီတော့ကျွန်တော်က ရှင်းပြတယ်။ အဲဒီဘက်မှာကသူတို့က မြန်မာစပါးအုံးတွေကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ထားကြတော့ သူတို့ကသိကြတယ်။ အဲဒီနေ့ကစပြီး ကျွန်တော့်ကို Burmese Python လို့ခေါ်ခဲ့ကြတာ။
Q-ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ MMA မှာ မကြိုက်တဲ့အရာနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာက ဘာတွေဖြစ်မလဲ? A-ဘာတွေမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတော့ MMA မှာ စိတ်ဓာတ်တွေက မြင့်ရင်လည်း အရမ်းမြင့်တယ်။ ကျရင်လည်း အရမ်းကျတယ်။ စိတ်ဓာတ်က တစ်ခါတလေကျရင် အရမ်းကျတာ။ပွဲတွေနိုင်ရင်လည်း အရမ်းတက်နေတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်အတက်အကျကို မထိန်းနိုင်ရင် အရမ်းကို ခက်ခဲမယ့်အလုပ်ပါ။ ပျော်ပြီး အရမ်းမြင့်နေရင်လည်း မဟုတ်တာတွေလုပ်တတ်သလို အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျနေရင်လည်း မဟုတ်တာတွေလုပ်ချင်လိမ့်မယ်။ အဲဒီအရာတွေကို ထိန်းချုပ်ရလိမ့်မယ်။ အဲဒီအရာကို ကျွန်တော်သဘောမကျဘူး။ ကျွန်တော်ကြိုက်တာကဘာလဲဆိုတော့ လေ့ကျင့်မှုတွေ နေ့တိုင်းလုပ်နေရင်ပျော်တယ်။ အကြိုက်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။Q-ကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ကြိုးဝိုင်းထဲက ခံစားချက်နဲ့ ကြိုးဝိုင်းအပြင်က ခံစားချက်တွေမှာ ဘာတွေ ကွာခြားမှုရှိလဲ? A-ကြိုးဝိုင်းထဲဝင်ရတဲ့ ခံစားချက်တွေက အများကြီး ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကစိတ်တွေအရမ်းကြွနေတယ်။ လူတချို့ဆိုကြောက်စိတ်ဝင်တာတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် အဲဒီခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်ထားရတယ်။ အသက်ရှူတာက အစပေါ့။ စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားရတယ်။ ကြိုးဝိုင်းအပြင်မှာဆို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ ထိုးနေရင် ကျွန်တော် ပိုကြောက်တယ်။ ပိုပြီးစိုးရိမ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးရှိတယ်။Q-လက်ရှိမှာ ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေး ရတော့မယ်လို့သိရတယ်။ အမည်ကိုရော ဘယ်လိုပေးဖို့ စဉ်းစားထားလဲ? A-လာမယ့်ဇန်နဝါရီဆို ကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးရတော့မှာပါ။ သမီးလေးပါ။ သူ့နာမည်ကတော့ ဆမ်ဆန်းပေါ့။ ဆမ်ဆန်းဂရေ့စ်အင်န်ဆန်းလို့ နာမည်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ရော ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးရော စဉ်းစားထားပါတယ်။
Q-ဗီရာနဲ့ပွဲမှာရခဲ့လို့ ခွဲစိတ်ထားရတဲ့ လက်က ဒဏ်ရာအခြေအနေကိုလည်း ပြောပြပါ? A-ညာဘက်လက်မ အရိုးလွဲသွားတာပေါ့။ ပွဲထိုးချိန်နောက်ဆုံးထိုးချက်မှာ အရိုးလွဲသွားတာပါ။ ဒီလက်အိတ်ချွတ်ချိန်မှာ လက်မ နာတာပါ။ ပွဲပြီးတော့ စစ်ဆေးကြည့်တော့ အရိုးလွဲသွားတာပါ။ ကျွန်တော့်ဆရာဝန်က ပင်အပ်နှစ်ချောင်းလိုတယ်ပြောတယ်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ အမေရိကန်မှာပဲခွဲစိတ်ပြီး ပင်အပ်နှစ်ချောင်းထပ်ထားရတယ်။ နောက်ထပ်လေးပတ်လောက်ဆိုရင် သေချာပြန်လေ့ကျင့်လို့ရပါပြီ။
Q-နှစ်နှစ်ကစားပြီးရင် အနားယူမယ်လည်းပြောထားတော့အဲဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပါဦး? A-အခုကတော့ ကျွန်တော် ကျန်းမာသေးတယ်။ ကောင်းကောင်းကစားနိုင်သေးတော့ အကောင်းဆုံး ကစားမယ်။ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံးမစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲဒါပြီးရင်တော့ သိထားတဲ့ ပညာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်သင်ပေးဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ မိသားစုနဲ့ ပြန်လာပြီး ဒီမှာ အခြေချဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ Q-အနီးစပ်ဆုံးပွဲက ဘယ်တော့ဖြစ်နိုင်မလဲ? A-ကျွန်တော်ဒီလက်က ပတ်တီးဖြေပြီးတာနဲ့ လေ့ကျင့်မယ်။ရတာနဲ့ ကျွန်တော်ထိုးသတ်မယ့် ရက်ကို ကျွန်တော် သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားမယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထင် ၂ဝ၂ဝ မတ်လလောက် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
Q-MMA နဲ့ လက်ဝှေ့ကို ဝါသနာပါတဲ့ မျိုးဆက်သစ်ကစားသမားတွေအတွက်ကို ဘာပြောချင်တာရှိလဲ?A-ကျွန်တော်ပြောချင်တာက MMA နဲ့လက်ဝှေ့ဆိုတာကအပြေးနဲ့ပြောရရင် တာတိုမဟုတ်ဘူး။ မာရသွန်ပေါ့နော်။အချိန်အကြာကြီး မြှုပ်နှံထားရတယ်။ ရင်းနှီးထားရတယ်။တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆို ဆယ်နှစ်ကျော်လောက် ကစားခဲ့ရတယ်။ အခုမှအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ဒီအတွက် နှစ်တွေ ၁၆ နှစ်လောက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ အချိန်ယူပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ပါ။ မြန်မြန် မအောင်မြင်ချင်ပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Q-အောင်လအင်န်ဆန်းကို အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဘာပြောချင်လဲ?A-ကျွန်တော့်ကိုအားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်။ ဒီလိုအားပေးမယ်လို့လည်းတစ်ခါမှမထင်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုအားပေးတဲ့အတွက် အားပေးရကျိုးနပ်အောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။ အားလုံးဂုဏ်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။
မွနျမာနိုငျငံကို အလညျအပတျပွနျလညျရောကျရှိနတေဲ့ One Championship မဈဒယျဝိတျတနျးနှငျ့ လိုကျဟဲဗီးဝိတျ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ အောငျလအငျနျဆနျးကို မွနျမာတိုငျးမျ အားကစားသတငျးထောကျ စညျသူအောငျမြိုးကြျောက တှဆေုံ့မေးမွနျးထားသညျကို ဖျောပွလိုကျရပါသညျ။Q-ပထမဆုံးအနနေဲ့ Burmese Python ဆိုတဲ့အမညျကို ဘယျလိုရခဲ့တာလဲ?
A-ကြှနျတျောဘယျလိုရခဲ့တာလဲဆိုတော့ ၂ဝဝ၆ ခုနှဈမှာအမရေိကနျမှာစကစားတော့ ကြှနျတေျာ့ကို ဘယျနိုငျငံကလဲလို့မေးတယျ။ မွနျမာကလို့ပွောတော့မသိကွဘူး။ အဲဒီတော့ကြှနျတျောက ရှငျးပွတယျ။ အဲဒီဘကျမှာကသူတို့က မွနျမာစပါးအုံးတှကေို အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျအဖွဈထားကွတော့ သူတို့ကသိကွတယျ။ အဲဒီနကေ့စပွီး ကြှနျတေျာ့ကို Burmese Python လို့ချေါခဲ့ကွတာ။
Q-ကစားသမားတဈယောကျအနနေဲ့ MMA မှာ မကွိုကျတဲ့အရာနဲ့ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့အရာက ဘာတှဖွေဈမလဲ? A-ဘာတှမေကွိုကျဘူးလဲဆိုတော့ MMA မှာ စိတျဓာတျတှကေ မွငျ့ရငျလညျး အရမျးမွငျ့တယျ။ ကရြငျလညျး အရမျးကတြယျ။ စိတျဓာတျက တဈခါတလကေရြငျ အရမျးကတြာ။ပှဲတှနေိုငျရငျလညျး အရမျးတကျနတေယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျဓာတျအတကျအကကြို မထိနျးနိုငျရငျ အရမျးကို ခကျခဲမယျ့အလုပျပါ။ ပြျောပွီး အရမျးမွငျ့နရေငျလညျး မဟုတျတာတှလေုပျတတျသလို အရမျးစိတျဓာတျကနြရေငျလညျး မဟုတျတာတှလေုပျခငျြလိမျ့မယျ။ အဲဒီအရာတှကေို ထိနျးခြုပျရလိမျ့မယျ။ အဲဒီအရာကို ကြှနျတျောသဘောမကဘြူး။ ကြှနျတျောကွိုကျတာကဘာလဲဆိုတော့ လကေ့ငျြ့မှုတှေ နတေို့ငျးလုပျနရေငျပြျောတယျ။ အကွိုကျဆုံးအလုပျတဈခုဖွဈတယျ။Q-ကစားသမားတဈယောကျရဲ့ ကွိုးဝိုငျးထဲက ခံစားခကျြနဲ့ ကွိုးဝိုငျးအပွငျက ခံစားခကျြတှမှော ဘာတှေ ကှာခွားမှုရှိလဲ? A-ကွိုးဝိုငျးထဲဝငျရတဲ့ ခံစားခကျြတှကေ အမြားကွီး ဖွဈတယျ။ ကိုယျကစိတျတှအေရမျးကွှနတေယျ။ လူတခြို့ဆိုကွောကျစိတျဝငျတာတှရှေိတယျ။ ကြှနျတျောဆိုရငျ အဲဒီခံစားခကျြကို ထိနျးခြုပျထားရတယျ။ အသကျရှူတာက အစပေါ့။ စိတျကိုငွိမျအောငျထားရတယျ။ ကွိုးဝိုငျးအပွငျမှာဆို ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြးတှေ ထိုးနရေငျ ကြှနျတျော ပိုကွောကျတယျ။ ပိုပွီးစိုးရိမျတဲ့ခံစားခကျြမြိုးရှိတယျ။Q-လကျရှိမှာ ဒုတိယမွောကျရငျသှေးလေး ရတော့မယျလို့သိရတယျ။ အမညျကိုရော ဘယျလိုပေးဖို့ စဉျးစားထားလဲ? A-လာမယျ့ဇနျနဝါရီဆို ကြှနျတျောဒုတိယမွောကျရငျသှေးရတော့မှာပါ။ သမီးလေးပါ။ သူ့နာမညျကတော့ ဆမျဆနျးပေါ့။ ဆမျဆနျးဂရစျေ့အငျနျဆနျးလို့ နာမညျပေးမယျလို့ကြှနျတျောရော ကြှနျတေျာ့အမြိုးသမီးရော စဉျးစားထားပါတယျ။
Q-ဗီရာနဲ့ပှဲမှာရခဲ့လို့ ခှဲစိတျထားရတဲ့ လကျက ဒဏျရာအခွအေနကေိုလညျး ပွောပွပါ? A-ညာဘကျလကျမ အရိုးလှဲသှားတာပေါ့။ ပှဲထိုးခြိနျနောကျဆုံးထိုးခကျြမှာ အရိုးလှဲသှားတာပါ။ ဒီလကျအိတျခြှတျခြိနျမှာ လကျမ နာတာပါ။ ပှဲပွီးတော့ စဈဆေးကွညျ့တော့ အရိုးလှဲသှားတာပါ။ ကြှနျတေျာ့ဆရာဝနျက ပငျအပျနှဈခြောငျးလိုတယျပွောတယျပေါ့။ အဲဒါနဲ့ အမရေိကနျမှာပဲခှဲစိတျပွီး ပငျအပျနှဈခြောငျးထပျထားရတယျ။ နောကျထပျလေးပတျလောကျဆိုရငျ သခြောပွနျလကေ့ငျြ့လို့ရပါပွီ။
Q-နှဈနှဈကစားပွီးရငျ အနားယူမယျလညျးပွောထားတော့အဲဒီအစီအစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး ပွောပွပါဦး? A-အခုကတော့ ကြှနျတျော ကနျြးမာသေးတယျ။ ကောငျးကောငျးကစားနိုငျသေးတော့ အကောငျးဆုံး ကစားမယျ။ကမ်ဘာမှာ အကောငျးဆုံးမဈဒယျဝိတျတနျးဖွဈဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။ အဲဒါပွီးရငျတော့ သိထားတဲ့ ပညာတှေ၊ အတှအေ့ကွုံတှကေို ပွနျသငျပေးဖို့စိတျကူးထားတယျ။ မိသားစုနဲ့ ပွနျလာပွီး ဒီမှာ အခွခေဖြို့ စီစဉျထားတယျ။ Q-အနီးစပျဆုံးပှဲက ဘယျတော့ဖွဈနိုငျမလဲ? A-ကြှနျတျောဒီလကျက ပတျတီးဖွပွေီးတာနဲ့ လကေ့ငျြ့မယျ။ရတာနဲ့ ကြှနျတျောထိုးသတျမယျ့ ရကျကို ကြှနျတျော သတျမှတျနိုငျဖို့ ကွိုးစားမယျ။ ကြှနျတေျာ့ စိတျထငျ ၂ဝ၂ဝ မတျလလောကျ ဖွဈမယျထငျတယျ။
Q-MMA နဲ့ လကျဝှကေို့ ဝါသနာပါတဲ့ မြိုးဆကျသဈကစားသမားတှအေတှကျကို ဘာပွောခငျြတာရှိလဲ?A-ကြှနျတျောပွောခငျြတာက MMA နဲ့လကျဝှဆေို့တာကအပွေးနဲ့ပွောရရငျ တာတိုမဟုတျဘူး။ မာရသှနျပေါ့နျော။အခြိနျအကွာကွီး မွှုပျနှံထားရတယျ။ ရငျးနှီးထားရတယျ။တဈနှဈ၊ နှဈနှဈနဲ့မရဘူး။ ကြှနျတျောအနနေဲ့ဆို ဆယျနှဈကြျောလောကျ ကစားခဲ့ရတယျ။ အခုမှအကောငျးဆုံးကစားသမားတဈယောကျ ဖွဈလာတယျလို့ မွငျမိတယျ။ဒီအတှကျ နှဈတှေ ၁၆ နှဈလောကျ ပေးဆပျခဲ့ရတယျ။ ပွောခငျြတာကတော့ အခြိနျယူပါ။ ကိုယျ့ဘာသာ ကြှမျးကငျြအောငျလကေ့ငျြ့ပါ။ မွနျမွနျ မအောငျမွငျခငျြပါနဲ့လို့ ပွောခငျြပါတယျ။
Q-အောငျလအငျနျဆနျးကို အားပေးနတေဲ့ ပရိသတျတှကေို ဘာပွောခငျြလဲ?A-ကြှနျတေျာ့ကိုအားပေးတဲ့ ပရိသတျတှအေားလုံးကို ကြေးဇူးအရမျးတငျတယျ။ ဒီလိုအားပေးမယျလို့လညျးတဈခါမှမထငျခဲ့ဘူး။ ဒီလိုအားပေးတဲ့အတှကျ အားပေးရကြိုးနပျအောငျ ကြှနျတျောကွိုးစားမယျ။ အားလုံးဂုဏျယူနိုငျအောငျကွိုးစားမယျ။